News under जीवनशैली
काठमाडौँ । देवानी कानुन अन्तर्गत पर्ने पारिवारिक कानुनको एउटा प्रमुख पाटो हो सम्बन्ध विच्छेद। सामान्य अर्थमा सम्बन्ध विच्छेद भन्नाले पति र पत्नी बिच कायम रहेको सम्बन्ध विभिन्न कारणले कानुनी रूपमा अन्त्य हुने प्रक्रियालाई बुझिन्छ। सयौँ जुनी सँगै हुने कसम खाएर गाँसिएका सबै सम्बन्ध सधैँभरि सुमधुर नै हुन्छन् भन्न सकिँदैन। नेपालमा...
दिपावली पर्व सके लगतै मिथिलामा छठको तयारी
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 17th November 2020
काठमाडौं । दीपावली पर्व सकेर मैथिल अब लोकआस्थाको पर्व छठको तयारीमा जुटेका छन्। कात्तिक शुक्ल द्वितीयाका दिन &lsquo;भरद्वितीया&rsquo; (भैयादुज, भ्रातृद्वितीया पनि भनिने भाइटीका) पर्वसँगै दीपावली (यमपञ्चक) सम्पन्न भएपछि मैथिल (मिथिलाका बासिन्दा) अब श्रद्धा र निष्ठापूर्वक मनाइने छठको तयारीमा जुटेका हुन्। कात्तिक शुक्ल चतुर्थी (चौथी) देखि सप्तमीसम्म चार दिन विभिन्न विधिसाथ सम्पन्न...
मेयर साबको निर्देशनः बाहिर खुवाउँदा शोभनीय देखिएन, खुलामञ्चमा खाना नखुवाउनु !
काठमान्डौं : अभियन्ता बद्रीप्रसाद ढुंगानाले खुलामञ्चमा हरेक दिन झण्डै दुई सय जनालाई निःशुल्क खाना बितरण गर्छन् । खाना खाने समूहमा कोरोना महामारीका कारण काम नपाएका र काम पाएर पनि खान धौधौ भएका मजदुरहरुको बाहुल्य हुन्छ । अशक्त र असहाय पनि हुन्छन् । तर, सोमबार ढुंगानाको समूहले खाना वितरण गरिरहँदा अवरोध झेल्नुपर्यो...
खाना खाइसकेपछि नगर्नुहोस् यी गल्ती, पर्न सक्छ भारी
मानिस स्वस्थ रहन धेरै कुरामा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईले खाना खाने बित्तिकै कुनै पनि काम तुरुन्तै गर्नु उचित हुँदैन । जबकी तपाईले जतिनै पौष्टिक तत्व भएका खाना खाएपनि त्यसले शरीरमा नकारात्मक असर पार्छ। खाना लगत्तै के के काम नगर्ने ? १. धुम्रपान नगर्नुःखाना खाने बित्तिकै धुम्रपान गर्ने ब्यक्तिलाई ग्यास्ट्राइटिसको...
गोरो बन्न मन छ ? यी उपाय अपनाउनुहोस्
सुन्दर, गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन तपाइँहामी सधै प्रयासरत हुन्छौ । क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहारमा चमक ल्याउन कुनै कसर छोड्दैनौँ । अनेक किसिमका क्रिम, पाउडर लगायतका चिजहले अनुहारका साथै छालामा नकारात्मक असर पनि गरिरहेको छ। आज हामी तपाईलाई गोरो बन्ने प्राकृतिक उपायका बारेमा जानकारी दिदैछौँ । यी उपाय अपनाउनुहोस्कागतीः...
सुत्ने बेलामा नगर्नुस् यी ८ काम
सुत्ने कोठा हाम्रो जीवनको महत्वपूर्ण स्थल हो । यहाँ हामीले दिनको २४ घण्टा मध्ये कम्तिमा ६ घण्टा भन्दा बढि नै विताउँछौं । तर यी सुत्ने कोठामा विभिन्न गलत काम गर्दा हामीलाई सुत्न समस्या हुन्छ । यहाँ सुत्ने समयमा गर्न नहुने ८ कामको चर्चा गरिएको छ । १. सुत्ने बेलामा धुम्रपान गर्ने...
एजेन्सी&ndash; सौन्दर्य ताको कुरा गर्दा चाइनिज युवतीहरु अरु देश हरु भन्दा भिन्न प्रकारका हुन्छन । चाइनिज युवतीहरुको सुन्दरता को चर्चा बिस्वमै हुन्छ। चाइनिज युवतीहरुले आफुहरुलाई सुन्दर बनाउन को लागि बिभिन्न उपाएहरु अपनाउने गरेका हुन्छन । त्यो कारण ले पनि चाइनिज युवतीहरु आफ्नो अनुहार बेदाग , चम्किलो अनि नरम छाला को लागि...
श्रीमतीले सिन्दुर लगाउँदिनन् भने उनी सम्बन्धविच्छेद चाहन्छिन्
भारतको एक अदालतले श्रीमतीले सिन्दुर र चुरा लगाउन अस्विकार गर्नुको अर्थ सम्बन्धविच्छेदको आधार भएको भनि अर्थ्याएपछि त्यसको चौतर्फी बिरोध भएको छ। भारतको गुवाहाटी हाइकोर्टले श्रीमतीले सिन्दुर र चुरा लगाउन नमान्नु भएको उनी आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई जारी राख्न नचाहने बताएको हो। एक व्यक्तिले गुवाहाटी हाइकोर्टमा सम्बन्धविच्छेदको याचिका दर्ता गरेका थिए। यसमा चीफ न्यायाधिस...
सुत्ने समयमा यी कुराहरु ध्यान दिनुहोस्, नत्र पर्नसक्छ असर
एजेन्सी&ndash; आनन्दको निद्राको चाहना कसलाई हुँदैन र । प्राय हामीले मिठो निद्राका लागि सामान्य उपाय अप्नाउने गर्दछौँ। सफा ओछ्यान, शान्त वातावरण तथा राम्रो कुरा सुनेर ओछ्यानमा जानु। तर केही यस्ता कुरा छन् जो जसले तपाईको मिठो निद्रा बाहेक अन्य विपरित असर पार्ने गर्दछ। वास्तु विशेषज्ञ मुकुल रस्तोगीका अनुसार पुराण र धर्मशास्त्रका...
एजेन्सी&ndash; पति पत्नीको सम्बन्ध अटुट विश्वास र प्रेममा टिकेको हुन्छ। दुबै एक अर्कालाई हरेक कुरा शेयर गर्ने गर्दछन्। तर हरेक मानिसको कुनै न कुनै कुरा गोप्य हुने गर्दछन्, जुन कुरा नजिकको साथीसँग पनि गोप्य राखिन्छन्। यस्ता कयौँ कुरा हुन्छन्, जुन पत्नीले पतिसँग शेयर गर्दैनन्। महिलाले पतिसँग गोप्य कुरा शेयर नगर्नु...
कसको चाहाना हुँदैन श्रीमान् श्रीमती सधै हांसी खुशी बाँचौ । तर कसैको त्यो चाहनामा कहिलेकाँही ठेस लाग्छ, कसैको भने पुरा हुन्छ । कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीको इच्छा चाहनाको ख्यालै नगर्ने स्वार्थी हुन्छन् भने कोहि पुरुष आफ्नो श्रीमतीलाई सुखी र खुशी राख्न कुनै कसुर बाँकी राख्दैनन् । ज्योतिष शास्त्रकाअनुसार कसैले सुखी...
यसरी गर्नुहोस मास्कको उचित प्रयोग
काठमाडौं&ndash; धुवाँ धुलो वा अन्य सरुवा रोग पछिल्लो समय बिकराल रुप लिइरहेको कोरोनाभाइरस, स्वान फ्लु जस्ता समस्याहरुबाट जोगिनका लागि माक्सको प्रयोग प्रभाबकारी हुने बिशेषज्ञहरु बताउँछन् । धेरैजसो मानिसहरुले यस्ता समस्याहरुबाट जोगिनका लागि माक्सको प्रयोग गरेपनि उचित तरिकाले प्रयोग गर्न जान्दैनन् । उचित तरिकाले मास्कको प्रयोग नगर्दा मास्कले पुर्याउने फाइदा हुदैँन । कपडाको...
जानी राख्नुहोस् : बच्चाले सिक्का तिखोधारीलो बस्तु निलेमा के गर्ने ?
उत्सुक र चकचके स्वभाव बच्चाहरूको गुण नै हो । सिक्का, गुच्चा, साना ब्याट्री लगायत अन्य धारिलो बस्तु उनीहरूले मुखमा हाल्छन् । गुच्चा निलेमा गोलो प्रकृतिको हुने भएकाले पेट, आन्द्रा हुदै दिसाबाट बाहिर निस्किन्छ । खानेनलीमा सिक्का अड्कियो भने तुरुन्त निकाल्नुपर्छ । पेटको भागमा बसिरहेको छ, अरु लक्षण देखाएको छैन भने...
हेर्नुहोस आजको राशिफलः २०७७ असार १२ गते, शुक्रबार
आज २०७७ असार १२ गते शुक्रबार । ज्योतिष शास्त्रमा जन्म समय अनुसार फलादेश हुन्छ । सोही अनुसार उनीहरुको दैनिकी कस्तो रहन्छ ? भन्ने विषयमा भविष्यवाणी गरिन्छ । तपाईको आजको दिन कस्तो रहनेछ ? मेषसोखले खर्च बढाए पनि मनपर्ने भौतिक साधन जोड्ने समय छ। हाँसखेल र मनोरञ्जनपूर्ण समय छ । पारिवारिक...
कुन उमेरका महिलाले दिन्छन् बढी यौन सन्तुष्टि?
एजेन्सी &ndash; यौन सबैको अपरिहार्य र आवश्यक कुरा हो । हाम्रो नेपाली समाजलाई यौन सम्बन्ध भन्ने वित्तीकै लाजको रुपमा लिने गरीन्छ तथापी यौन एक अपरिहार्य र आवश्यक चिज हो । यौन सम्बन्धका बिषयमा विभिन्न अध्ययनले विभिन्न प्रतिवेदनहरुले फरक फरक विश्लेषण गरेता पनि यौन जीवनको लागी आवश्यक कुरा भन्नेमा कसैको विमती...
यामाहा मोटरसाइकल तथा स्कुटर ब्रान्डको शुन्य प्रतिशत फाइनान्स स्किम
काठमाडौं । नेपालका लागि यामाहाको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेज प्रा. लि.ले यामाहा ब्रान्डका मोटरसाइकल तथा स्कुटर खरिदमा शुन्य प्रतिशत फाइनान्स स्किम सुरु गरेको छ । यामाहाले सामाजिक दुरी र सुरक्षित यात्राको महत्वलाई मध्यनजर गर्दै उक्त स्किम ल्याएको हो । &lsquo;असहज परिस्थिति, सहज समाधान&rsquo; नाम दिइएको यो स्किमले नयाँ यामाहा खरिद गर्दा...
महिलाहरुले यौन सम्बन्धको बेला के चाहन्छन् ? हरेक पुरुषले जान्नैपर्ने कुरा
एजेन्सी - सेक्स सम्बन्ध पुरुष र महिलाबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर सेक्स सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ । यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले के चाहन्छन्...
गोपाल ढकाल, मनोविद बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतको आत्महत्या पछि बलिउडमा हुने गरेको नातावाद र सिण्डिकेटको बिषयलाई लिएर चर्को बहस शुरु भएको छ। मुम्बईमा ठूलो सिन्डिकेट चलिरहेको छ। त्यहाँ नातावाद हावी छ। सुशान्तलाई बहिष्कार गर्ने वा फिल्मबाट निकाल्ने निर्माताहरूविरुद्ध आत्महत्याका लागि उक्साएको लगायतका आरोप लगाउन थालिएको छ। सुशान्तले आत्महत्या गर्नु...
केन्द्र सरकारको निर्णय उलंघन गर्ने जनप्रतिनिधिहरुनै, पार्टी प्यालेसमा सभा गर्दै गोकर्णेश्वर नगरपालिका
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 13th June 2020
काठमाडौं &ndash; कोभिड&ndash;१९ को महामारीले विश्व आक्रान्त छ । कारोनाकै कारण विश्वभर ७७ लाख ४२ हजार भन्दा बढी संक्रमित भएका छन् भने ४ लाख २८ हजार भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसेका छन् । कोरोना महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेको छैन । सुरुवाती चरणमा कोरोनाको प्रकोप नदेखिएको नेपालमा पछिल्लो समय तिव्र...
अहिलेसम्म पृथ्वीको तापक्रम १ डिग्री बढ्दा पनि मानव शरीरभित्रका ब्याक्टेरिया जागेका छैनन् । तर, तापक्रम ३ अथवा ४ डिग्री बढे के होला ? के मानव शरीरका ब्याक्टेरिया पनि साइगा हरिणको शरीरमा रहने ब्याक्टेरियाझैं जाग्ने त होइनन् ?वैशाख १३, २०७७सञ्&zwj;जीव उप्रेती मानव तथा प्रकृतिबीचको अन्तरसम्बन्धलाई ध्वस्त पार्दै गए के हुन...
By ट्रेनर जेम्स on 18th April 2020
यस पटक त्यहाँ पुरानो-पुरानो उत्सवको कुनै समारोहहरू छैनन्, त्यसैले म तपाईंलाई मान्छेहरू स्मृति लेन तल लैजाँदैछु। यो २०१ 2013 मा फर्किएको थियो जब मैले बिस्केट जात्रालाई पहिलो पटक ताउमाथी स्क्वायर र दत्तात्रेय स्क्वायरमा भएको घटनाको प्रत्यक्ष साक्षीको रूपमा हेरेको थियो। यहाँ के भएको छः यदि म यो भन्छु भने म खराब अवस्थामा पर्न...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 17th April 2020
There&rsquo;s no doubt about it, Nepal is opening up with new areas being explored by trekking agencies every season as the government makes more permits available to encourage tourist income into poorer regions of the country. While the busy&nbsp;Everest Base Camp&nbsp;and&nbsp;Annapurna Circuit trek&nbsp;still feature highly on the so-called &lsquo;bucket lists&rsquo;...
By अनलाइनखबरहब डेस्क on 26th March 2020